Teendhooyinka ku jira qaybtaan waa kuwo gaar ah oo gaar ah sababta oo ah adeegsiga xarrago ee 100% sharafta leh. Waxaa loo tolay kuwa jecel qaabka dabiiciga ah ee Scandinavian. Waxay ku farxaan fududaantooda iyo muuqaalkooda cayriin.
Teephegeenayadu waxay leeyihiin derbiyada 5 iyo saldhig santuuqa, oo ka dhigaya mid deggan oo ka ballaaran teendhooyinka leh saldhig laba jibbaaran. Dharka linenka ah ee la isticmaalay waxaa laga soo saaray Poland. Tipi wuxuu la imanayaa buug-gacmeed iyo dabool. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad abuurto jaangooyooyin leh qalabyada iyo agabyadayada.
Teendhada gogosha "Honey"
"Granat" linen gogoshii teendhada